UMary Ann Bickerdyke, uCalico Colonel weMfazwe yombutho
UCalico Colonel weMfazwe yombutho
UMary Ann Bickerdyke wayaziwa ngenkonzo yakhe yononongo ngexesha leMfazwe Yempi, kuquka ukubeka izibhedlele, ukufumana ukuzithemba kwabakhokheli. Wahlala ngoJulayi 19, 1817 ukuya kuNovemba 8, 1901. Wayebizwa ngokuba nguMama Bickerdyke okanye uColonel Colonel, kwaye igama lakhe elipheleleyo nguMary Ann Ball Bickerdyke.
UMary Ann Bickerdyke Biography
UMary Ann Ball wazalelwa ngo-1817 e-Ohio. Uyise, uHiram Ball kunye nonina, u-Anne Rodgers Ball, babengabalimi.
Unina u-Anne Ball wayesele watshata waza wazala abantwana kumtshato wakhe uHiram Ball. U-Anne wafa xa uMary Ann Ball eneminyaka elidala kuphela,. UMary Ann wathunyelwa kunye nodadewabo kunye nabantwana bakhe abangabantwana ababini abadala ukuba bahlale kunye nootatomkhulu babo, kunye naseOhio, ngelixa uyise ephinde watshata. Xa ootatomkhulu bafa, umalume, uHenry Rodgers, wayekhathalele abantwana ixesha.
Asizi kakhulu malunga noMary Ann ubudala. Ezinye iimithombo zithi zaya kwi-College yase-Oberlin kwaye yayiyinxalenye yeSitimela esingaphantsi komhlaba, kodwa akukho bungqina bembali kwezo ziganeko.
UMary Ann Ball watshata noRobert Bickerdyke ngo-Epreli ngo-1847. Esi sibini sasihlala eCincinnati, apho uMary Ann wayenceda ngononophelo ngexesha le-1849. Babenonyana ababini. URobert wayenenkinga yokugula ngenxa yokuba befudukela e-Iowa baze baye eGalesburg, e-Illinois. Wafa ngowe-1859. Ngoku u-Mary Ann Bickerdyke, umhlolokazi, kwafuneka asebenze ukuze azincede yena nabantwana bakhe.
Wayesebenza kwinkonzo yasekhaya kwaye wenza umsebenzi othile njengomongikazi.
Wayeyingxenye yeBandla laseCallregational eGalesburg apho umphathiswa wayengu-Edward Beecher, unyana we-edumileyo umphathiswa uLyman Beecher, kunye nomzalwana kaHarryet Beecher Stowe noCatherine Beecher, umntakwabo ka- Isabella Beecher Hooker .
Xa iMfazwe Yomphakathi yaqala ngowe-1861, uMfundisi u-Beecher waqwalasela imeko yebuhlungu yamajoni ayemi eCairo, e-Illinois. UMary Ann Bickerdyke wagqiba ekubeni athathe isenzo, mhlawumbi esekelwe kumava akhe oongikazi. Wabeka oonyana bakhe phantsi kwelinye ilondolozo lwabanye, waya eKairo kunye neemveliso zonyango ezaziye zanikelwa. Xa efika eCairo, wayethatha imeko yezempilo kunye noongikazi kwiinkampu, nangona abafazi bekungabikho ukuba babekho ngaphandle kwemvume yangaphambili. Xa isakhiwo sesibhedlele sagqitywa ekugqibeleni, waqeshwa ngokuthi i-matron.
Emva kokuphumelela kwakhe eKairo, nangona engenazo imvume esemthethweni yokwenza umsebenzi wakhe, wahamba noMary Safford, owayeye e-Cairo, ukuba alandele umkhosi njengoko wawuseningizimu. Wamnceda wabulala kwaye wagula phakathi kwamajoni emfazweni yaseShilo .
U-Elizabeth Porter, omelela iKhomishane yoCoceko , wathandwa ngumsebenzi kaBickerdyke, kwaye wahlela ukuba kuqeshwe njenge-"Agent field agent".
Ngokubanzi u-Ulysses S Grant wakhusela i-Trust yeBickerdyke, waza wabona ukuba unediphelo ekwiinkampu. Walandela umkhosi ka-Grant ukuya eKorinte, eMemphis, ngoko waya eVicksburg, onesihlengwa nganye.
E-Vicksburg, uBickerdyke wanquma ukujoyina umkhosi kaWilliam Tecumsah uSherman njengoko waqala ukuhamba emzantsi, kuqala waya eChattanooga, ngoko uhambo lukaSherman oludlulayo ngeGeorgia. USherman wavumela u-Elizabeth Porter noMary Ann Bickerdyke ukuba bahambe nomkhosi, kodwa xa umkhosi wafika e-Atlanta, uSherman wathumela uBickerdyke ngasentla.
USherman ukhumbula uBickerdyke, owayeye eNew York, xa umkhosi wakhe uhambela eSavannah . Walungiselela ukuba abuyele phambili. Ekubuyeni kwakhe emkhosini kaSherman, uBickerdyke wema ixesha elithile ukuba ancede kunye nabamabanjwa baseManyano abasandul 'ukukhutshwa kwintolongo yaseCompederate kwinkampu yemfazwe yaseAndersonville . Ekugqibeleni waxhamla noSherman kunye namadoda akhe eNyakatho Carolina.
UBickerdyke wahlala kwisithuba sakhe sokuzithandela - nangona eyaziwayo kwiCommunity Sanitary - kude kube sekupheleni kwemfazwe, ngo-1866, ukuhlala ixesha elide njengoko kwakukho amajoni asele.
Emva kweMfazwe yombutho
UMary Ann Bickerdyke wazama imisebenzi emininzi emva kokushiya inkonzo yempi. Wagijima ehotele kunye noonyana bakhe, kodwa xa wagula, bamthuma eSan Francisco. Wayephosa ekuncedeni ukuxhasa ipensheni yabalindi. Wayeqeshwe kwi-mint eSan Francisco. Kwakhona waya kwiintlanganiso zeGrand Army yaseRiphabhlikhi, apho inkonzo yakhe yaqatshelwa kwaye yabhiyozelwa.
UBickerdyke washona eKansas ngowe-1901. Ngowe-1906, idolophu yaseGalesburg, apho ayeyishiyile ukuya ekulweni, wayihlonipha ngesiqu.
Nangona abanye abahlengikazi kwiMfazwe yoLuntu behlelwe yimithetho yecawa okanye phantsi komyalelo kaDorothea Dix, uMary Ann Bickerdyke ubonisa olunye uhlobo lomongikazi: umvolontiya ongekho uxanduva kuye nawuphi na umphathi, kwaye ngubani ohlala edibanisa kwiinkampu apho abesifazane bavunyelwe ukuba bahambe.
Imibuzo yeBetty Friedan: Umsunguli wesifazane
Ukuguquka kweMerika: I-Admiral George Rodney, uBaron Rodney
UHannah Höch Biography
UJohn Stuart Mill, Owesifazane Owesifazane
UMalala Yousafzai: Umncinci omncinci weNobel yoKhuseleko loNobel
Ukuguqulwa kweMerika: iCommodore John Paul Jones
Imbali kaPauline Cushman
Imibuzo yeBate Didrikson Zaharias
Imfazwe yaseSpain-Amerika: I-USS Maine Explosion
Umhlobo Ogqwesileyo - Umhlobo waseHoleni
Ubunjani Ubunzima be-Oyili obuhle kakhulu kwi-High-Mileage Nissan Maxima?
Yintoni echanekileyo Idatha?
Funda indlela yokudweba iHarashi, inyathelo ngesinyathelo
Imizamo Yesigqeba Yokulawula I-Monopoly
Yintoni Ndiyatsho Abantu Abantu Bathi Ubuhedeni Bububi?
Imbali yeBare-Knuckles Boxing
Inkcazo emfutshane yeSithili seSanctuary
Ziziphi iingubo ekufuneka ndizise eKholeji?
Iimidlalo zaseOlimpiki zasendulo - Imidlalo, iSithethe kunye neMfazwe
I-Admission Academy Academy
I-Biography kaJohn Garang de Mabior
Funda Ukuqhafaza okulula kwe-"Rappeler" (Ukubiza kwakhona)
Ukunyuka kweHook eGoli
Ukuqonda ukuba kutheni iRodeo Bulls Buck
Musa ukuCima ngaphambi kokuba Ufunde Oku
I-Biography / Iprofayili kaMarissa Mayer, i-CEO ye-Yahoo kunye ne-Google VP yangaphambili
Iikiti, I-Suborder Ixodida
Ukufundiswa kweeKholeji kubaFundi abaNgcini
I-Triumph Bonneville Ixesha elide lokuhlola - Ingxelo # 6
Yintoni iChemistry? Inkcazo kunye neNkcazo